दुखद खबर: काम गर्दै गर्दा कोरोना सन्क्रमित भएछु ! «
दुखद खबर: काम गर्दै गर्दा कोरोना सन्क्रमित भएछु !
Published : 24 August, 2020 8:51 am
म एक नर्स म आफ्नो पेशामा गर्ब गर्छु। मलाइ थाहा छ कि म केवल का लागि मात्र पढेकाे होइन जस्तो सुकै अवस्थामा पनि बिरामिको सेवा गर्न सकु र गर्छु भनेर नर्स पेशा अगालेको हु। आफ्ना ब्यक्तिगत कुराहरुलाइ त्यागेर निरन्तर रुपमा बिरामिको सेवामा लागिरहेको पनि केहि बर्स भैसकेछ्। काम गर्दै गर्दा यो अवस्था आउछ होला भन्ने सोचेको थिएनौ ।